Dagaal ka socda gudaha Xabsiga Dhexe ee Xamar | Keydmedia
Dagaal ka socda gudaha Xabsiga Dhexe ee Xamar
Warar hordhac ah oo Keydmedia Online helayso ayaa sheegaya in mid kamid ah maxaabiista uu qoriga ka xoogey askari, kadibna uu billaabay toogasho gudaha xabsiga oo ay ku xiran yihiin maxaabiis katirsan Al-Shabaab, oo qaarkooda dil ku xukuman.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa fahfaahin dheeraad ah laga helayaa rasaas galabta laga maqlay gudaha Xabsiga Dhexe ee Xamar, oo kamid ah goobaha sida aadka ah amnigooda loo ilaaliyo, kuna yaalla aagga cagaaran ee magaaladda Muqdisho.
Sida Keymedia Online u sheegay sarkaal katirsan Ciidanka Asluubta, qof kamid ah maxaabiista ayaa qoriga ka xoogey askari ilaalada katirsan, wuxuuna kadib toogtay askartii kale ee gudaha ku sugnayd, waxaana jira khasaaro isagu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ciidanka Asluubta iyo Boolis ayaa isku dayaya inay qabtaan Ninka hubeysan ee rasaasta ridaya, iyadoo wararka ay sheegayaan in maxaabiis kale oo hub helay ku biireen dagaalka.
Xubno halis ah oo katirsan Al-Shabaab, oo qaarkood dil toogasho lagu xukumay ayaa ku jira xabsiga Dhexe, oo dhawaan isbedel lagu sameeyay amnigiisa kadib markii sanadkan horaantiisa ka baxsadeen dhowr maxbuus oo argagaxiso ah.